Thu, May 24, 2018 | 15:22:17 NST
मनोसामाजिक समस्या र परिवारको भूमिका मैले मनोसामाजिक परामर्शकर्ताका रुपमा काम गर्न थालेको ३ वर्ष भयो । त्यो भन्दा पहिला सामाजिक परिचालकको रुपमा काम गर्थें । मनोसामाजिक परामर्श भनेको प्राविधिक विषय हो त्यसैले स्कोप छ भन्ने सुनेको थिएँ । सुरुमा त मनोसामाजिक समस्यामा परेको व्यक्तिलाई भेट्दा उसमा समस्या धेरै थिए । उनी तनाव धेरै भएपछि बेहोस हुँदा रहेछन् । उनलाई देख्ता त मैले परामर्श दिएर ठिक बनाउन सकिन्छ कि सकिंदैन भन्ने लाग्यो । त्यतिबेला म १५ दिनको तालिमपछि पहिलो पटक परामर्श दिन पुगेको थिएँ त्यसैले पनि होला । तर पनि हामीलाई सा... पुरा पढ्नुहोस
अब त विदेशको नाम पनि लिन्न पाँच जना छोराछोरी सहितको ६ जनाको परिवारको खर्च धान्न निक्कै गाह्रो भयो । विदेश जान पाए कमाउन सकिन्थ्यो अनि परिवार चलाउन सजिलो हुन्थ्यो भन्ने सोचेर म २०६८ सालमा मलेसिया गएँ । एक लाख रुपैयाँ लिएको म्यानपावरले मलाई शेनाइ शहरमा रहेको रबर फयाक्ट्रीमा पठाएको थियो । तर भन्जाले यो भन्दा धेरै तलब पाइन्छ भनेपछि उनीसँगै कुखुरा फार्ममा पुगें । तर १८ महिना नपुग्दै मलाई पुलिसले पक्रियो । त्यो पनि राती १२ बजे । राती १२ बजे एकहुल पुलिस आएर सुतेकै ठाउँबाट उठाएर लगे । सिमेन्टको चिसो भुईंमा सास... पुरा पढ्नुहोस
युवालाई विदेश जान बाध्य बनाएर कहिलेसम्म मनाउने आप्रवासन दिवस ? आज १८ डिसेम्बर अर्थात १७ औं विश्व आप्रवासन दिवस । विभिन्न ठाउँमा विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाइँदैछ । आप्रवासन सामाजिक समस्या भएकोले यसले प्रतक्ष्य अप्रत्यक्ष रुपमा सामाजिक लागत बढाउँदै छ । मैले सामाजिक लागत भनेर आप्रवासनका कारणले निम्तिने शारिरीक, मानसिक र सामाजिक भन्न खोजेको हुँ । झट्ट हेर्दा आप्रवासनका कारणले के ठूला समस्या आउलान र भन्ने लाग्न सक्छ । किनकी हामीले अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारीले घर बनाएका र गाडी किनेका कुरामा मात्रै ध्यान दिएका छौं । हुन पनि परिवारको आर्थिक अवस्था सुधार... पुरा पढ्नुहोस
मलेसियाकाे नेपाली दूतावासका कर्मचारीले हेला गर्छन्, सरकार हामी कतिन्जेल तड्पिएर बाँच्नु ? नेपालमा रोजगारीको अभावमा दैनिक २ हजार भन्दा बढी वैदेशिक रोजगारको लागि जाने गरेका छन् । उनीहरु जाने मध्ये एउटा देश हो मलेसिया । मलेसिया कुनै समय सबैभन्दा धेरै नेपाली जाने अनि धेरै नेपाली रहेको देश थियो । नेपालीहर जति धेरै भए समस्या पनि त्यति नै धेरै भए । तर नेपाली दूतावासले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसक्दा दूतावास श्रमिकको भन्दा पनि म्यानपावरका दलाल र पहुँच पुग्नेहरुको मात्रै भएको छ भन्ने कुरा त भनिरहनु पर्दैन । वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मलेसिया पुग्ने मजस्ता लाखौं श्र... पुरा पढ्नुहोस
गोबर सोहोर्छु, बाख्रा चराउँछु, तर विदेश जान्न विदेश जाँदा मसँग केही सीप थिएन । पढेको थिइन । न त गाउँघरमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास नै थियो । सबैजनाले विदेशबाट कमाएर फर्किएको देखेँ । राम्रो लुगा लगाएको देखेँ । सँगैका साथीले कमाउँछन भने मैले चाहिँ कसो नकमाउँला र जस्तो लाग्यो । २०६० असार २५ गते कतार गएँ । कतार उड्नका लागि ८० हजार रुपैयाँ ऋण काढ्नु पर्‍यो । प्लम्बरको हेल्परको काम हो भनेका थिए । मामाको छोराले पठाएकाले मलाई शंका पनि लागेन । घर परिवार छाडेर कमाउँला भनेर गएको तर के आफूले सोचेजस्तो हुन्थ्यो । हेल्पर हैन लेवरक... पुरा पढ्नुहोस
श्रीमान् जेलबाट छुटेर घर आउँदै गरेको सुन्दा क्यान्सरको पीडा पनि कम भयो तपाईंहरुलाई भनेपछि पक्कै पनि सहयोग हुन्छ भन्ने थियो । त्यसैले म हिँड्न सक्ने अवस्थामा नहुँदा पनि घिस्रिए जस्तै गरेर सिन्धुपाल्चोकको चौतारामा रहेको सूचना केन्द्रमा पुगेको थिएँ । त्यहाँबाट तपाईंहरुले कात्तिक २२ गते खबर लेखिदिनुभयो । खबर लेखेपछि म्यानपावरले पनि चासो देखायो । अनि सूचना केन्द्रबाट पनि उद्धार गर्ने संस्थामा पहल गरिदिनु भएछ । त्यसपछि उहाँलाई जेलबाट निकाल्न पहल सुरु भएको रहेछ । म यहाँ कहिले उहाँ जेलबाट छुटेको खबर आउँछ भनेर पर्खिरहेको थिए । उहाँले जेलबाट निस्किएपछि नन्दे भा... पुरा पढ्नुहोस
६ वर्ष अघि विदेश जाने बेलामा ‘दूध खाँदै रैछौ’ भनेर पठाउनै मानेका थिएनन् म परिवारमा जेठो छोरो । १२ कक्षा पढ्दै थिएँ । भाइबहिनी पनि पढ्दै थिए । तर बुवाआमाले खेती किसानी गरेर हामी ६ जनालाई पढाउन सम्भव भएन् । बुवा विदेश पनि जानुभयो । उहाँले परदेशमा पसिना बगाउँदा पनि घरको आर्थिक अवस्था सुधार भएन । त्यसपछि मैले विदेश जाने सोच बनाएँ । धेरै म्यानपावर धाएँ । हातमा विशेष सीप थिएन । कम्युटर चाहिँ सिकेको थिएँ । कम्युटरको हार्डवयेर तालिम पनि लिएको थिए । तर मेरो यो सीप विदेश जानका लागि काम लागेन । म्यानपावरमा विदेश जानका लागि डिमाण्ड बुझ्न जाँदा म्यानपावरका मान्छेले ‘दुध ख... पुरा पढ्नुहोस
कोरियाको रोजगारी : आफैंले आफैंलाई विश्वास गर्नुहोस् नेपाली युवाका लागि दक्षिण कोरिया रोजगारीको आकर्षणको केन्द्र बनेको छ । रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस)मार्फत औद्योगिक, कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा नेपाली युवा भित्रिने क्रम जारी छ । कोरियामा नेपाली कामदारको संख्या झण्डै ५० हजार पुगेको छ । त्यहाँ जाने कामदार प्लस टु वा स्नातक पढ्दै गरेका १८ देखि २५ वर्ष उमेरका धेरै छन् । नेपालमा धेरै काम नगर्ने तर कोरिया पुगेपछि दैनिक १२/१५ घण्टा काम गर्नुपर्छ । त्यहाँको दैनिकीसँग हेलमेल हुन समय लाग्छ । सुखले हुर्किएकाहरु त्यसरी काम गर्नुपर्दा मानसिक तनावमा पर... पुरा पढ्नुहोस
युएईमा राष्ट्रपतिले कामदारप्रति देखाउनुभएको माया राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यो हप्ता युएईको राजकीय भ्रमण गर्नुभयो । आबुधाबीका युवराज तथा सशस्त्र बलका नायव सर्वोच्च कमाण्डर शेख महम्मद बिन जाहेद अल नेह्यानको बिशेष नीमन्त्रणामा उहां युएई आउनु भएको थियो । युएईमा उहाँले उच्चस्तरीय भेटघाट तथा छलफल गर्नुभयो । दुई देशबीचको कुटनीतिक सम्बन्ध, आपसी सहयोग तथा अन्य विषयमा छलफल भएका कुरा संचार माध्यममा आइरहे । राष्ट्रपतिको युएई भ्रमणलाई यहाँ कार्यरत नेपालीहरुले अझै चासोका साथ हेरिरहेका थिए । सामाजिक सन्जालमा देश घुम्न मात्रै आएको कि कुनै नेपाली... पुरा पढ्नुहोस
​म्यादी प्रहरीको जागिर खाएपछि विदेश जाने नजाने दोधारमा १२ कक्षामा पढ्दै गर्दा मेरो बिहे भयो । यो ४ वर्ष अघिको कुरा हो । बिहे छोरा पनि जन्मियो । केही समय अघिसम्म परिवारको चलेको जीवन अब आफैं चलाउनुपर्ने भयो, त्यो पनि अभिभावक भएर । त्यतिबेला पढाई स्नातक तहमा पुगेको थियो । मैले कुनै राम्रो देश जानुप¥यो भन्ने सोचेर डेनमार्क जान प्रक्रिया सुरु गरें । एक महिना दुई हुँदै १ वर्ष भइसक्दा डेनमार्क जान सम्भव नभएपछि मैले खाडीकै देश भएपनि जानुपर्‍यो भन्ने सोचें । त्यसका लागि आफन्त पर्ने रामदेव महतोलाई पासपोर्ट दिएँ तर जान पाएको थिइनँ । त्यति... पुरा पढ्नुहोस
कुवेतमा भूकम्प : परिवार भन्दा टाढा भएका बेला मरिने हो कि भन्ने लाग्यो आइतबार मेरो साप्ताहिक बिदा थियो । त्यसैले म कोठामै थिएँ । साँझ परेपछि साथीहरु क्यारेमबोर्ड खेल्न बाहिर निस्किए । कपडामा आइरन गर्नुपर्ने भएकाले म चाहिँ कोठामै बसें । आइरन लगाइसकेपछि साथीहरु आउनुभन्दा अघि नै खाना बनाउँछु भनेर खाना बसाएर मासु काट्दै थिएँ । मासु काट्न सुरु गरेको मात्रै थिएँ रिंगटा लागे जस्तो भयो । सुरुमा त के भएको हो भन्ने मैले ठम्याउनै सकिन । तर हातमा भएको चक्कु खसेपछि म आत्तिएँ । पाँच तलामा भएकाले मज्जैले हल्लिएको थियो । यसो माथि हेरेको त बल्बहरु पनि हल्लिँदै रहेछन् ... पुरा पढ्नुहोस
​विदेश पुगेपछि मात्रै पैसा चिनें म २०६९ साल भदौ २९ गते साउदी अरबको नजरान भन्ने ठाउँमा अफिस ब्वाईमा गएको हो । प्लस टु पढिसकेपछि पहिलो पटक विदेश गएको सुरुमा तसाह्रै दुःख पाएँ । भनेको काम पाइन । भनेको तलब पनि दिएन । काम पनि धेरै गाह्रो थियो सामान लोड अनलोड गर्नुपर्ने । त्यो पनि धेरै भारी । त्यसपछि मात्रै मैले पैसा चिनें । घरमा हुँदा काम गर्ने बानी नभएको तर त्यहाँ त काम गर्दिन भन्न पनि पाइन् । त्यसैले त्यस्तै दुःख गरेर १८ महिना बसें । केही महिना दुःख भएपनि त्यसपछि केही सजिलो भयो । दुःख भएपनि कमाई चाहिँ हुन्थ्यो । त्यसैल... पुरा पढ्नुहोस
​पासपोर्ट हरायो भन्ने म्यानपावर नयाँ पासपोर्ट बनाउने पैसा दिन बाध्य भयो विदेश जाने निधो भएपछि मैले २०७१ साल फागुनमा काठमाडौंको फ्लोरिडा म्यानपावरमा पासपोर्ट बुझाएँ । पैसा चाहिँ दिएको थिइन् । पासपोर्ट दिएको एक महिना, दुई महिना मात्रै होइन दुई वर्ष हुँदा पनि विदेश पठाउने छाँटकाँट देखाएन । मैले त्यो बिचमा धेरै पटक पासपोर्ट फिर्ता दिन आग्रह गरें तर म्यानपावरका कर्मचारीले पासपोर्ट हराएको भन्दै खोजिदिन्छु मात्रै भनिरहे । पासपोर्ट फिर्ता पाइन्छ कि भनेर घर फर्किएर पर्खिएँ । मैले फोन गरिरहन्थें तर पछि त म्यानपावरको फोन नै उठ्न छोड्यो । फोन उठ्न छोडेपछि केही नलागेर फेरि पास... पुरा पढ्नुहोस
यसरी मैले विदेश जाने सोच त्यागें म त्यति विदेश जाने सोचमा थिएँ । आफ्नो धेरै माटोबारी थिएन् । ६ जनाको परिवार चलाउनु पर्ने जिम्मेवारी जेठो छोरो भएकाले मेरै काँधमा थियो । त्यसैले विदेश जान पाए म सहित परिवारको अवस्था सुध्रिन्थ्यो कि भन्ने लाग्यो । त्यसैले कहाँ जाने अनि को मार्फत जाने भनेर बुझ्दै थिएँ । त्यति नै बेला हाम्रो गाउँमा वित्तीय साक्षरता कक्षा हुने खबर पाएँ । यो कक्षामा विदेश जानेहरु, फर्किएका आएका र उनीहरुको परिवारलाई फाइदा हुने कुरा सिकाइने भनेपछि म पनि गएँ । साँच्चै त्यहाँ त विदेश गएर फर्किएका र उनीहरुका परिवारल... पुरा पढ्नुहोस
सम्झना/समिक्षा : गर्नुपर्ने तर गर्न नसकेका कामहरु थुप्रै रहे २०५१/५२ देखि कार्पेट क्षेत्रमा रहेको अन्याय, अत्याचार र विसंगतीलाई हटाई समतामूलक समाज सिर्जना र श्रमजीवि वर्गलाई समृद्धि तर्फ डोर्‍याउने लक्ष्यका साथ नेपाल स्वतन्त्र मजदुर संगठनको प्रथम सम्मेलनबाट निर्वाचित भएको थिएँ । विभिन्न पद र जिम्मेवारी पुरा गर्दै श्रमजीवि वर्गको हितमा काम गर्दै नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघको पाँचौ महाधिवेशनबाट उपमहासचिवको जिम्मा पाएको थिएँ । बुद्धि, विवेक, श्रम र सिर्जनाबाट आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न कटिवद्ध भएकोले महासंघले २०७० सालमा सम्पन्न संविधानसभा सदस्यका ला... पुरा पढ्नुहोस
कामदारकै रुपमा विदेश आएर पनि नेपालीलाई सहयोग गर्न पाउँदा खुशी छु कुवेत आएको दुई वर्ष भएको थियो । कुवेत आउने बेलामा कागजी समस्याले भनेको समयमा आउन नपाउँदा क्यानाडा जाने सुरमा श्रीमतीको गहना बेचेको पैसा पनि सिध्याएँ । यहाँ आएको दुई वर्षसम्म म पनि अरु जस्तै एउटा कामदारमा मात्रै सीमित भएँ । तर त्यसपछि अर्थात २०१३ मा अग्रज दाइहरुले लुम्बिनी समाज नेपाल, कुवेत नाम राखेर संस्था खोल्ने तयारी गर्नुभएछ । त्यसमा मलाई पनि सहभागी गराउने कुरा गर्नुभयो । यसले मलाई कुवेतमै रहेका अरु साथीहरुसँग मात्रै होइन् कुवेतमा रहेको नेपाली दूतावासका कर्मचारीसँग पनि चिनजान गर्ने मौक... पुरा पढ्नुहोस
परदेशका १८ वर्ष: काम त पाइयो तर भनेजस्तो कमाई भएन जीवनको उर्जाशिल समय मैंले परदेशमा नै बिताएको छु । २२ वर्षको उमेरमा परदेशिएको थिएँ । झण्डै २० वर्ष अघि विदेश जाने भनेर खाडीका देशमा जाने चलन खासै थिएन । गाउँका साथीभाइ आफन्त सबैजना भारत जान्थे । म पनि उनीहरुकै साथ लागेर कोलकत्ता पुगें । भर्खरै गाउँबाट भारत पुग्दा काम के गर्ने, कसरी गर्ने पीर पनि लागेको थियो । मैले सुरुमा सेक्युरिटी गार्डको काम पाएँ । एक दुई वर्ष त्यही काम गरें । त्यसपछि मार्केटिङको काम गर्न थालें । बजारबाट पैसा उठाएर ल्याउन पथ्र्यो । बिस्तारै मार्केटिङ म्यानेजर भएँ । म्यान... पुरा पढ्नुहोस
​मलेसियामा छोराले काम गर्ने तलव नपाउने ! मेरो छोरा नसिव रैन मिया २०७३ चैतमा मलेसिया गएको हो । छोरालाई मलेसिया पठाउन मैले टाउकोमा दुई लाख श्रृण बोकेको छु । छोरा प्रोडक्सन अपरेटरको काम भनेर मलेसिया गयो । त्यहाँ पुगेपछि सप्लाईको काम पायो । तर सप्लाईको काम भनेको जता दाम उतै काम हुँदो रहेछ । कामको केहि टुँगो छैन । दाम चाँहि साहुले लिने गर्दछ । छोराले दिनरात नभनि मलेसियामा काम चाँहि गरेको छ । तर दामचाँहि पाएको छैन । अचेल दिनहुँ रुदै छोराले फोन गर्छ । आठ महिना बितिसक्दा पनि कामको टुँगो छैन भन्छ । म यो कम्पनी छोडेर अन्यत्रै क... पुरा पढ्नुहोस
​एनआरएनएमा नीति जमुनाको, नेतृत्व भवनको ! निश्चित गन्तब्य तर्फको लामो यात्रामा हिँडेको यात्री १/२ ठक्करमै हरेश खाँदैन, बिचलित हुँदैन । हरेक चुनावले शिक्षा र अनुभव दिन्छन् । थप खारिँदै जाने अवसर दिन्छन् । अघिल्लो चुनावले मुलतः राजनीति मात्रै सिकाएको थियो, यसपटककोले त साम, दाम, दण्डभेद सबै सिकायो । कतिपय प्रबृत्ती र पात्रहरूको असली भित्रीरूप जान्न, देख्न पाइयो । चुनावी प्रतिस्पर्धामा नगएको भए केवल अन्दाज मात्र गर्न सकिनेथियो । अनुभूति नै गर्न मिल्ने थिएन । एनआरएनएको आठौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट भिजन २०२० तथा बियोण्ड पारित भएक... पुरा पढ्नुहोस
कुवेत आउन नपाउँदा क्यानडा जान श्रीमतीको गहना बेचेको थिएँ कुरा सन् २०११ अगष्टको हो । त्यतिबेला नेपालमा गर्दै गरेको व्यावसाय चौपट भएपछि विदेशिन बाध्य भएँ । कुवेत आउने तयारीमा म मात्रै एक्लै थिइन । दुई जना साथी पनि थिए । हामी तीन जना कुवेत जान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुग्यौं । त्यहाँ कागजपत्र देखाउने ठाउँमा २ जना साथीको काम बन्यो तर मेरो चाहिँ रोकियो । मेरो पासपोर्ट र भिसामा जन्म मिति दुई दिन फरक परेकाले म भित्र छिर्न पाइँन् । ती दुई जना साथीले जान्छौं पनि भन्न सकेनन् जान्नौं पनि भन्न सकेनन । स्थिती सबैको त्यस्तै हो त्यसैले मैले ... पुरा पढ्नुहोस